Julen Lopetegui oo markii ugu horeesay la hadlay saxaafada kadib markii maanta laga ceeriyay shaqada xulka Spain – Gool FM
Julen Lopetegui oo markii ugu horeesay la hadlay saxaafada kadib markii maanta laga ceeriyay shaqada xulka Spain
Dajiye June 13, 2018
(Spain) 13 Juunyo 2018. Julen Lopetegui ayaa macsalaameeyay ciyaartoyda xulka qaranka Spain kahor inta uusan ka dhaqaaqin, kadib markii uu xiriirrka kubada cagta ee dalka Spain shaqada ka ceyrinin maanta, waxaana booskiisa lagu badalay Fernando Hierro.
Xiriirka kubada cagta ee dalka Spain ayaa wuxuu si layaab leh ugu dhawaaqay laacibkii hore kooxda Real Madrid Fernando Hierro inuu yahay badalka Julen Lopetegui, kaasoo xulka leylin doono koobka aduunka 2018 ee bari oo khamiis ah furmi doono.
Julen Lopetegui oo ay saxaafada weydiisay dareenkiisa ku aadan kadib marka shaqada laga ceeriyay ayaa wuxuu jawaab celin kaga dhigay “Aad ayaan u murugeysanahay, laakiin waxaan heysanaa koox weyn, waxaana rajeyneynaa inaan ku guuleysano Koobka Aduunka”.
Real Madrid ay ku dhawaaqday in Lopetegui uu yahay badalka Zinedine Zidane, laga bilaawo xili ciyaareedka cusub 2018/2019. Taasoo keentay in madaxweynaha xiriirrka kubada cagta dalka Spain uu go’aansado inuu shaqada ka casilo si uu ugu badalo booskiisa Fernando Hierro.
“Waxaan iska diiday kooxaha Real Madrid iyo Chelsea sababa la xiriira Juventus”… Massimiliano Allegri
Real Madrid oo Habeen Dambe Saxaafadda u soo bandhigi doonta Tababaraheeda Cusub balse waa haddii......